အမျိုးသားများအတွက်များအတွက်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်း - အဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
သင်သို့မဟုတ်သင်နှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးဦး porn နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိသလား ဤအပိုင်းကိုရိုးရှင်းတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာယောက်ျားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသူတို့ရှိခြင်းစေခြင်းငှါမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမဖော်ထုတ်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဤသည်ညစ်ညမ်းနေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာဆက်စပ်လျှင်ကြည့်ဖို့လူရိုးရှင်းတဲ့ Do-It-ကိုယ့်ကိုကိုယ်စမ်းသပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့နှေးကွေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသို့မဟုတ် performance ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုကနေမယ့်အစားကိုအဓိကအားထားလျှင်လူတို့သညျအထဲကကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ဂယ်ရီ Wilson ကကတီထွင်ခဲ့သည်။
1 ။ ပထမဦးစွာအကောင်းတစ်ဦးဆီးရောဂါပါရဂူကိုတွေ့မြင်နှင့်မည်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမူမမှန်ထွက်အုပျစိုး။
၂။ နောက်တစ်ကြိမ်တွင်သင်အကြိုက်ဆုံး porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (သို့မဟုတ်သင်ကကျိန်ဆိုမိလျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ) ။
3 ။ ထို့နောက်အခြားအခါသမယတွင်အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းနဲ့ porn နှင့် ပတ်သက်. ကူးယဉျမပါဘဲ masturbate ။
သင့်ရဲ့စိုက်ထူ၏အရည်အသွေးနှင့် (သင်ထှတျအထိပျနိုငျပါလျှင်) အထွတ်အထိပ်မှ ယူ. အချိန်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ တစ်ဦးကကျန်းမာလုလင်ကိုအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်အပြည့်အဝစိုက်ထူမရရှိစများနှင့်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ် porn စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲ orgasm မှ masturbating ရှိသင့်ပါတယ်။
သငျသညျ #2 အတွက်ခိုင်မာတဲ့ #3 အတွက်စိုက်ထူပေမယ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိပါက, ထို့နောက်သင်ဖြစ်နိုင် Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (PIED) ရှိသည်။ သငျသညျအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့လိုပါတယ်။ အဆိုပါဆုကြေး Foundation ၏ သုံးခြေလှမ်းပြန်လည်နာလန်ထူမော်ဒယ် အကြံပြုသည်။
#3 ခိုင်မာတဲ့နှင့်အစိုင်အခဲဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်အမှန်တကယ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလျှင်, သင်ဖြစ်နိုင်စိုးရိမ်စိတ်-related ED ရှိသည်။
သငျသညျ #2 နှင့် #3 နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်းပြဿနာများရှိပါကသင်သည်တိုးတက်သော Porn-သွေးဆောင် ED သို့မဟုတ်သင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်များအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော-The-ခါးပတ်ပြဿနာရှိနိုင်သည်။
porn-induced erectile dysfunction (PIED) နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းတွေကို နက်နက်နဲနဲ စေ့စေ့ငုကြည့်ဖို့ Your Brain on Porn စာအုပ်ကို စမ်းကြည့်ပါ။ ၎င်းကို စက္ကူနောက်ခံအဖြစ်၊ မီးစက်တွင်လည်းကောင်း၊ အော်ဒီယိုစာအုပ်အဖြစ် ရနိုင်သည်။
Donald L. Hilton, Jr., MD, FAANS၊ San Antonio တွင်မှာတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံစင်တာတက္ကသိုလ်